आधुनिक युगको एकतर्फी प्रेम – An Online Entertainment News Portal
Homeblogआधुनिक युगको एकतर्फी प्रेम
December 9, 2017 Keshab Khadka blog, Entertainment 0
सुर्य चन्द, काठमाडौँ : एकतर्फी प्रेम त्यो हो, जसमा एउटाले माया गर्छ तर अर्कोले त्यो प्रेम अस्वीकार गर्छ । मलाई पनि पहिले त्यस्तै लाग्थ्यो । आजभोलि बुझ्दैछु, एकतर्फी प्रेममा अर्कोले पनि माया त गरेकै हुन्छ तर अर्काको मायाको गहिराइ कति छ बुझेको हुँदैन । प्रेम गर्नेले बुझाउन सक्दैन । सम्भवत: त्यही कारणले उनीहरूको प्रेम सफल हुँदैन ।
प्रेम भनेको के हो? माया भनेको के हो? प्रेम र मायाको उत्तरको पछाडि दौडियौं भने शायद यसको जवाफ भेट्न सकिदैन होला।विभिन्न युगमा विभिन्न प्रेमी र विद्वानले प्रेमको परिभाषा आ-आफ्नो तरिकाले दिएका छन्। जति प्रेमको परिभाषा बुझ्दै गयो त्यति यो प्रेमको गहिराइले हामीलाई डुबाउँदै जान्छ। मानिसहरूले भने झै प्रेम नि:स्वार्थ छ भनौ भने प्रेममा स्वार्थ पनि भेटेको छु। प्रेममा छलकपट हुँदैन भनौ भने छलकपट गर्नेको लामै लाइन देखेको छु।
मलाई लाग्छ प्रेम ‘सत्य’ हो। मानिसरूपी जिवनको मीठो भोगाइ हो प्रेम। साहित्यमा भेटिने रस हो प्रेम। तर, पनि प्रेम विभिन्न चरण र बाध्यमा परेका हुन्छन्।
आमाले छोरालई गर्ने प्रेम, बुवा-छोरीको प्रेम, दाजुभाई, दिदीबहिनीको प्रेम, साथीसंगीको प्रेम र मानिस र जनावरको प्रेम। जतिपनि प्रेमलाई हामिले नियाल्ने कोशिस गरेमा हरेक कुरामा माया तथा आत्मियता भेट्छौ। त्यसैले प्रेम एक महान ‘सत्य’ हो।
तर, आजकाल जुन हिसाबले प्रेममा विकृति बढेको छ म फेरि सोच्न बाध्य हुन्छु आखिर के हो त यो प्रेम भन्ने चिज? कसैलाई मीठा कुरा भन्दैमा, गुलाफको फूल दिँदैमा हुने हो त प्रेम? आजकलको प्रेम होटल रिसोर्टको रुम भित्र भेटिन्छ, गजल बार, डिस्को र रात्रि क्लबमा भेटिन्छ, शपिंग सेन्टर भित्र, मुभी थिएटरमा भेटिन्छ तर यथार्थमा यो प्रेम नभई आकर्षण मात्र हो l जवानीको रसपान को लागि मात्र आजकलका मानिसहरु एकान्त स्थान खोजिरहेका हुन्छन l एकले अर्कालाई क्षणीक खुसि प्राप्त गर्न मात्र खोजिरहेको हुन्छन l केटाले केटीलाई र केटीले केटालाई गर्ने प्रेम निश्चल हुनु पर्छ, भावनात्मक हुनु पर्छ एक अर्कालाई बुज्ने हुनु पर्छ, एकले अर्कालाई समय दिनु पर्छ l
एकतर्फी प्रेमले गर्दा मानिसलाई बेचयन बढाउछ, छट्पटि बढाउछ, प्रेमीलाई डिप्रेसनमा लैजान्छ भने अन्तत धेरै प्रेमीहरुले आत्माहत्या समेत गरेका उदारणहरु प्रसस्त छन् तसर्थ कसैलाई झुटो आस्वासन दिएर स्वार्थ पुरा गर्न र शारीरिक आकर्षणको लागि मात्र प्रेम गर्नु भन्दा सुरुमानै दुवै प्रेमी प्रेमिकाले हरकुरा स्पष्ट बनाउदा कसैको जिबन बर्बाद हुन बाट जोगिन्छ भने जिबन सुखमय पनि हुन्छ l शारीरिक मिलन मात्र प्रेम होइन भने धन सम्पति संग र आफ्नो स्वार्थ संग सटिने प्रेमले गर्दा समाजमा माया प्रेम सम्बन्धि नकारात्मक सोच पैदा हुदै गएको छ l बिस्वासको धरातल माथि उभिएर गरिने प्रेम माथि घृणा पैदा हुदै गएको छ l तसर्थ माया प्रेमलाई ब्यापार नबनाउ अरुको भावना संग खेल्न बन्द गरौ l
समयको विभिन्न कालखण्डमा हामीले सुनेका भोगेका तथा देखेका प्रेम कहानीहरु समेत साक्षि छन l सत्ययुगका भगवानहरुका प्रेम कहानी, रासलिला देखि अहिले कलियुगको रोमियो जुलियट, मुना मदन देखि अहिले गाउ देखि शहरको गल्लि गल्लि सम्म देखिने माया प्रेमले प्रेमको परिभाषालाई समेत फरक बनाएको छ भने अहिलेको समाजलाई चुनौती समेत दिएको छ l त्यसैले प्रेम निस्वार्थ गरौ, बुजेर गरौ, एकतर्फी प्रेममा पागल भएर जिबन बर्बाद नगरौ, कसैको सुन्दर जिबन संग खेलबाड नगरौ , प्रेम सम्झौतामा नगरौ l
ढल्कीदो उमेरमा टाईगर जिन्दाहेका लागि सलमानको शारीरिक सुगठनको चुलिदो चर्चा